HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA98 IranLozam-pifamoivoizana ao Iran, naratra 4 naratra 35
Lozam-pifamoivoizana ao Iran, naratra 4 naratra 35
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 98 Iran, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY 0
Lozam-pifamoivoizana naratra tao ireland
Fiaran-dalamby mpandeha Zahedan-Tehran any Iran. Farafaharatsiny olona 4 no maty ary misy olona 35 no naratra tamin'ny loza.
Sistan sy Iran any Balochistan ao amin'ny faritany Zahedan sy Başknet Tehran dia eo anelanelan'ny fiaran-dalamby. Araka ny tatitra vonjimaika dia olona 4 no maty ary olona 35 no naratra tamin'ny loza.
Ny talen'ny jeneralin'ny krizy amin'ny fanjakana Abdulrahman Sehnvazi, dia nilaza fa nivezivezy noho ny fanangonam-pasika teo amin'ny lalamby. Confirmedehnvazi dia nanamafy ny isan'ny maty sy naratra ary nandefa ekipa fanampiana, helikoptera ary ambulance tany amin'ny faritra. Ny masoivoho fanampiana vonjy maika avy any Iran dia nilaza fa mavesatra ny toe-javatra naratra ary mety hitombo ny isan'ny maty.
Natomboka ny fanadihadiana iray momba ny loza.
Lozam-pifamoivoizana any Alemaina: maty 3, naratra 13 15 / 04 / 2012 Novonoina ny olona 3 ary olona 13 no naratra nandritra ny lozam-piaramanidina taorian'ny misasakalina teo akaikin'i Offenbach, Alemaina. Niala tao Frankfurt ka hatrany Hanau ny lamasinina, namely ny sambo mpandeha an-dalamby tany Offenbach Mühlheim ary nandositra ny lamasinina. Tamin'ny loza, ny mpamily fiarandalamby sy olona roa dia novonoina tao anaty bala. Ny fiarovana an'i Offenbach dia nanambara ny fampidirana hopitaly ny 6 avy amin'ireo naratra. Nanomboka ny fanadihadiana momba ny loza, dia nitranga ny loza nianaran'ilay asa. Voalaza fa misy mpandeha 20 iray manontolo ao anaty fiaran-dalamby izay eo anelanelan'i Frankfurt sy Hanau, izay misy 35 kilometatra avy amin'io tanàna io. Loharano: Fotoana
Lozam-piaramanidina ao Arzantina, 3 maty maty 100 naratra 14 / 06 / 2013 Lozam-piaramanidina ao Arzantina: olona 3 no maty ary mihoatra noho ny mpandeha 100 no naratra nandritra ny lozam-piaramanidina tao Buenos Aires, Arzantina. Novonoina i 3 ary mihoatra noho ny mpandeha 100 no naratra nandritra ny lozam-piaramanidina tao Buenos Aires, renivohitr'i Arzantina. Nanambara ny manampahefana ny maraina fa ny lamasinina fiarandalamby 2 miendrika fiarandalamby dia tonga tamin'ny lamasinina iray hafa tao amin'ny faritra Moron teo anelanelan'ny fiantsonana 2. Taorian'io loza io dia nisy mpandeha sasany nivoaka ny fiaran-dalamby niaraka tamin'ny trano ary nampahafantatra ny manampahefana. Ireo mpandeha izay nijanona tao am-ponja dia navotsotry ny fikarohana sy ny ekipa mpamonjy voina nalefa tany amin'ilay toerana. Ruben Sobrero, mpitarika ny Fiarandàlambin'ny Railroads, dia tao amin'ny volana 6 tao amin'ny lalamby lamasinina roa
Lozam-piaramanidina ao Arzantina, 3 maty maty tamin'ny 100 15 / 06 / 2013 Lozam-piaramanidina ao Arzantina, maty 3 maty 100 naratra Naratra tao amin'ny lozam-piaramanidina tao Buenos Aires renivohitra Arzantina, maty ny olona 3 ary mihoatra noho ny mpandeha 100 naratra. Nanambara ny manampahefana ny maraina fa ny lamasinina fiarandalamby 2 miendrika fiarandalamby dia tonga tamin'ny lamasinina iray hafa tao amin'ny faritra Moron teo anelanelan'ny fiantsonana 2. Taorian'io loza io dia nisy mpandeha sasany nivoaka ny fiaran-dalamby niaraka tamin'ny trano ary nampahafantatra ny manampahefana. Ireo mpandeha izay nijanona tao am-ponja dia navotsotry ny fikarohana sy ny ekipa mpamonjy voina nalefa tany amin'ilay toerana. Ny mpitarika ny fiarandalamby ao amin'ny Railroads Ruben Sobrero dia nilaza fa tsy nampiasaina nandritra ny volana 6 ny fiaran-dalamby roa eo an-tetezamita, ary nanomboka nihazakazaka indray andro vitsy lasa izay. Front ...
Fifandonan'ny fiarandalamby tany Frantsa 6 maty, 200 naratra (Lahatsary) 13 / 07 / 2013 Fiaramanidina frantsay maty 6 maty, 200 naratra: Nisy fiaran-dalamby boribory iray tany Essonne, atsimon'ny renivohitra frantsay, Paris. Ny fiaran-dalamby 6 avy any Paris mankany Limogesa dia nirakitra, 370'si olona 22 no naratra, anisan'izany ny mavesatra voarakitra. Ny fiaran-dalambon'i Teoz 60 dia miala avy ao amin'ny lamasinina fiarandalambon'i Austerlitz, ary ny fiara 3657 fiaran-dalamby dia miala ao amin'ny Station Bretigny-sur-orge, izay tsy anisan'ireo fijanonana ao amin'ny 17: 14 amin'ny fotoana eo an-toerana. Niteraka adin-tsaina be ny 7, ary ny sasany dia lavo tamin'ny sarety. Ny sarety sasany dia mamakivaky ny sehatra 4 metatra sy ny parallèle
1 maty, 2 naratra 21 / 08 / 2013 Tao amin'ny lozam-piaramanidina tamin'ny maty 1 maty, 2 no naratra: Ny tetezana sy ny ankizy miezaka miampita ny tetezana dia voan'ny lamasinina iray. Ny distrikan'i Germencik ao an-dalamby sy ny ankizy ao Aydin, miezaka ny miampita ny tetezana miaraka amin'ireo ankizy roa latsaka an-dalamby. Nodimandry teo am-pofoan-dreniny ilay zazalahy kely 4, ary naratra ny reniny sy ny zanany vavy hafa. Ny loza dia nitranga tao amin'ny tetezana an-dalamby teo amin'ny reniranon'i Provincial avaratr'i Germencik nandritra ny laharana 18.00. Nazilli-Söke ny fiaran-dalan'ny mpandeha an-tongotra, manandrana mandingana ny tetezana an-dalamby manerana ny Şükriye Duru (30) ary eo akaikin'i Edanur (5) sy Baby Xnumx isam-bolana no tratran'i Ecrin Duru. Miaraka amin'ny fiantraikan'ny fiantraikany, Xnumx isam-bolana Ecrin, ny lamosin'ny tetezana amin'ny làlamby
Minisitry ny Turhan, 'Lalana Silk maoderina dia mihamalalaka »
Lozam-pifamoivoizana any Alemaina: maty 3, naratra 13
Lozam-piaramanidina ao Arzantina, 3 maty maty 100 naratra
Lozam-piaramanidina ao Arzantina, 3 maty maty tamin'ny 100
Fifandonan'ny fiarandalamby tany Frantsa 6 maty, 200 naratra (Lahatsary)
1 maty, 2 naratra
Fifandonan'ny fiarandalamby tany Ejipta: maty 24, 28 naratra (Lahatsary)
Fiatrehana fiarandalamby tao amin'ny Distrikan'i Ilgın any Konya: 1 Maty, 1 Naratra (Video)
Ny fianjeran'ny fiarandalamby tany Amerika 7 maty, 12 naratra (Lahatsary)
11 maty 42 maty ny fianjeran'ny lozam-pifamoivoizana any India
Fiarandalamby 13 maty, 150 naratra tany Pakistana
Hyundai dia manomboka mampiasa teknolojia virtoaly amin'ny endrika volavola
Kocaeli, Torkia Vonona ny famoriam-bahoaka Championship
Rafitra Multimedia Native Multobilisation
Mihaona ao amin'ny Afyon ny Masters Show Masters môtô